ဒီနေ့ ည ဟွန်းတီးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီနေ့ ည ဟွန်းတီးပါ
ဒီနေ့ ည ဟွန်းတီးပါ
Posted by မောင် ပေ on Jun 23, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 18 comments
23.6.2012 စနေည(သို့ )တနင်္ဂနွေ နံနက် ၁.၁၅အချိန်မှာ ကန်ကြမယ့်
““ စပိန် ”” နဲ့ ““ ပြင်သစ် ”” တို့ ရဲ့ ယူရို၂၀၁၂ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
စပိန် အသင်းဟာ အုပ်စု စီ ရဲ့ အုပ်စုဗိုလ်ဖြစ်ပြီး ၊ အုပ်စုအဆင့် ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲများမှာ
10.6.2012 စပိန် ၁-၁ အီတလီ
14.6.2012 စပိန် ၄-၀ အိုင်ယာလန်
18.6.2012 ခရိုအေးရှား ၀-၁ စပိန်
ပြင်သစ် အသင်းဟာ အုပ်စု ဒီ ရဲ့ အုပ်စုဒုတိယဖြစ်ပြီး ၊ အုပ်စုအဆင့် ကန်ခဲ့တဲ့ပွဲများမှာ
11.6.2012 ပြင်သစ် ၁-၁ အင်္ဂလန်
15.6.2012 ယူကရိန်း ၀-၂ ပြင်သစ်
19.6.2012 ဆွီဒင် ၂-၀ ပြင်သစ်
3.3.2010 ပြင်သစ် ၀-၂ စပိန် (ခြေစမ်းပွဲ)
6.2.2008 စပိန် ၁-၀ ပြင်သစ် (ခြေစမ်းပွဲ)
27.6.2006 စပိန် ၁-၃ ပြင်သစ် ( ကမ္ဘာ့ဖလား )
စပိန် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Arbeloa, Ramos, Pique, Alba
လယ် Busquets, Alonso
လယ် Iniesta, Xavi, Silva
ရှေ့Torres
ပြင်သစ် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Debuchy, Koscielny, Rami, Clichy
လယ် Cabaye, M’Vila
လယ် Menez, Nasri, Ribery
ရှေ့Benzema
ယူရို၂၀၀၈ချန်ပီယံ စပိန်အသင်းဟာ ၊ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာကတဲက ကန်ခဲ့သမျှ ပွဲအားလုံးမှာ ၂ပွဲဘဲ အရှုံးရှိခဲ့ပါတယ် ။ ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလားမှာ ယူအက်စ်အေ ကို ရှုံးခဲ့တာနဲ့ ၊ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားအဖွင့်ပွဲတုန်းက ဆွစ်ဇာလန် ကို ရှုံးခဲ့တဲ့ ၂ပွဲပါ ။
ပြင်သစ်အသင်းဟာ ၂၃ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိ ကန်ခဲ့တဲ့ စံချိန် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲမှာ ဆွီဒင် ကို ၂-၀ နဲ့ ရှုံးလို့ ပျက်သွားပါတယ် ။
ပြင်သစ်ဟာ စပိန် ကို နိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့နောက်ဆုံးပွဲဟာ ၂၀၀၆ကမ္ဘာ့ဖလား ၁၆သင်းအဆင့်မှာ ဖြစ်ပြီး ၃-၁ နဲ့ နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီနောက် ထပ်ကန်ဖြစ်တဲ့ ခြေစမ်းပွဲ၂ပွဲလုံးမှာတော့ စပိန် ကဘဲ ပြင်သစ် ကို နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ အာရှဘက်မှာ စပိန် သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးအနေအထားကို သည်ဘက်မှာ စပိန် တစ်ဂိုးသွင်းမှ ၈၀ အနိုင်ဘဲ ဖွင့်လာပါတယ် ။
ဂိုးဈေးက ၂ဂိုးကို သရေအနေအထားကို သည်ဘက်မှာ ၂ဂိုး ဆိုရင် ၂၀ အရှုံးဖွင့်လာပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ “ စပိန် ” နဲ့“ ဂိုးအများ ” နဲ့ အောင်ဖို့ ရာ ၈၀%လောက် သေချာမှု ရှိပါတယ် ။
ကျုပ် မောင်ပေ့ စိတ်ကြိုက်ကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်လဲ “““ စပိန် ””” နဲ့“““ဂိုးအများ””” ပါဘဲ
“““ ဒီနေ့ ည ဟွန်းတီးပါ ””” …… ပေါ်…ပေါ်
……. အားလုံး အောင်မြင် ရွှင်လန်းပါစေ …….
ဟွန်းမတီးပဲ ခိုးမောင်းသွားပါတယ် ကိုပေရေ
မနိုရေ ကွန်မင့်ချီးမြှင့်ပေးလို့ ကျေးကျေးဘာ။
တယ်ရီ လမ်းပတ် ရာမီးရက်စ် says:
“စပိန်” နဲ့ “ဂိုးအများ” ပဲ တီးလိုက်ပီ ဗျားးး
ကောင်းပါပြီ တယ်ရီ လမ်းပတ် ရာမီးရက်စ် ရေ
အောင်မြင် ရွှင်လန်းပါစေ ခင်ဗျား
ပေါ်ပေါ် .. မြန်မာက ၇၈ မိနစ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်ကို ၅-၁ နဲ့ ကစားနေပါတယ် .. ပေါ်ပေါ် ..
တို့ မြန်မာ နိုင်ပြီ…
ကပေ သာ စပိန် ဆိုရင် ကျုပ် က ဖရန်စစ် ဖက်က နေမယ် ဗျို့။
ဘော်လုံး ဆိုတာ အလုံးကြီးမို့ မှန်းတိုင်း မမှန် ပါဘူးလေ။
ဘောလုံးပွဲ ဆိုတာ တစ်ဖက်ဖက် မှာ မှ မနေရင် ကြည့်မကောင်းဘူးတဲ့။ ;-)
စပိန်က တစ်ဂိုးသွင်းတာနဲ့ အပြည့်နိုင်လို့ ဖွင့်ထားတာကို ၊ စပိန် တစ်ဂိုးသွင်းရင် ၈၀ ဘဲ ဖွင့်ပေးလာတဲ့အခါကြ ၊ ဘူကီများဟာ စပိန်နိုင်မယ် ၊ ဂိုးအရမ်းတော့မပြတ်ဘူး ၊ ၁-၀ / ၂-၁ / ၃-၂ ရလဒ် လို့ ယူဆထားတဲ့ အနေအထားရှိပါတယ် ။
သည်နေ့ ညလို ယူရို၂၀၁၂ ကွာတားဖိုင်နယ်လို ပွဲမျိုးဟာ ခန့် မှန်းဖို့ အရမ်းခက်ပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားကိုကြည့်ပြီးဘဲ ၊ ဈေးအရ အားပေးသင့်တဲ့ အသင်းကို စဉ်းစားပြီး ရွေးခြယ်လိုက်တာပါ ခင်ဗျ ။
ကွန်မင့်ချီးမြှင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ ။
ခန့်မှန်းချက် အတိုင်းတော့ ဖြစ်နေပါပြီ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကနဦး အစ ဂိုး။
ပြင်သစ် က ကိုယ်လုံးကြီးလှဲချပြီး ပိတ်တာတောင် ရအောင် ပေးလိုက်နိုင်တယ်။
ဘောလုံးပွဲ အကြောင်းတော့သိပ်နားမလည်ပါဘူး…ဒါပေမယ့် ကိုပေ ဦးဏှောက်စားထားတာကို လေးစားသောအားဖြင့် ပေါ်ပေါ် ကိုင်လိုက်တယ်ဗျာ…နဲနဲပါးပါး…: D
ကိုပေရေ…ကျတော်တော့ ပြင်သစ်ကို ပိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ ကြေးအရပြောတာပါ၊ ကျတော်တို့ဆီမှာ စပိန်က ၁+၇၀ ( ၂-၂၀ ) ပေါက်တယ်ဗျ။ မီးနစ် ၉၀ အတွင်း ဂိုးတွေ အပြန်အလှန်သွင်းရင်း သရေလို့ထင်တယ်။ အချိန်ပိုမှာ စပိန်နိုင်ပြီး စပိန်ပဲ Semi တက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်သစ်နဲ့ ဂိုးအများကနေပဲ နေတော့မယ်ဗျို့။
ရန်ကုန်မှာဟွမ်းတီးရင် ဘဲဥဖမ်းလိမ့်မယ် ကိုပေရဲ့။ ဘောလုံးပွဲနားမလည်လို့ သိတာလေးဝင်ပွားသွား ပါကြောင်း။
ကိုကိုပေရေး post ဘယ်လိုတင်လဲ
How to writeapost ဆိုတာနဲ့ အဲဒီအောက်မှာ rules တွေ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ဘင်ကျို
spain20 france
body full win
gp 20% –
မောင်ပေး ဒီည ဘာကြိုက်လဲ
များက နေ့ ခင်းမှလာလို့နေ့ ခင်းမှပဲ တီးသွားပါတယ်..
ဗိုက်ဗိုက်ကတော့ နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ကြီးတီးသွားပါရောလား…
မြန်မာနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်(၅း၁)တဲ့ ဗျာ